RASMI: Christian Eriksen oo heshiis waqti dheer qallinka ugu duugay Tottenham – Gool FM
RASMI: Christian Eriksen oo heshiis waqti dheer qallinka ugu duugay Tottenham
(London) 06 Sebt 2016. Xiddiga qadka dhexe ee Tottenham Christian Eriksen ayaa qallinka ugu duugay naadigiisa heshiis cusub oo ku eg ilaa 2020.
“Waxaan ku faraxsanahay inaan shaacino in Christian Eriksen uu heshiis cusub la saxiixday kooxda ilaa 2020.”. sidaa ayaa lagu yiri warbixin ay Spurs soo dhigtay boggeeda Twitter.
Laackibka oo isna ku faraxsan heshiiska cusub ayaa yiri: “Mustaqbal wayn aya jira halkan, mana saxiixeen heshiis cusub haddii aan u jeedin midaa.
“Marwaliba qorshaha ayuu ahaa inaan saxiixo heshiis cusub iminkana way dhacday aad ayaan u faraxsanahay.”.
Arsenal iyo Man United oo wada doonaya Yaya Toure